Mahjong. 🥇 Pinda uye unakirwe kubva kuEmulator.online
Mahjong. MahJong mutambo wehungwaru unoda kutarisisa kwakawanda, uchenjeri uye njere. Dzidza kutamba Mah Jong, gadzira musanganiswa wakanakisa uye uve muhwina muhombe.
Mahjong: Maitiro Ekutamba Nhanho nedanho 🙂
Kutamba Mahjong online mahara, iwe unongofanirwa kudaro tevera iyi rairo nhanho nhanho:
2 danho. Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watove kuratidzwa pachiratidziri. Unofanira chete rova kutamba uye ikozvino unogona kutanga kutamba zvidimbu zvakafanana kuzvibvisa.
3 nhanho. Heano mamwe mabhatani anobatsira. Unogona "Wedzera kana bvisa ruzha", rova" bhatanitamba"uye tanga kutamba, unogona"Mira zvishoma"ndokumisa, bvunza"rubatsiro"kana"Kutangazve"chero nguva.
4 nhanho. Bvisai vaviri vaviri kusvika mutambo wapera, kugara uchirangarira mitemo yemutambo. Pakupedzisira, iwe unozogona kunyoresa zita rako uye iigovane pasocial network kana wapedza mutambo.
5 nhanho. Mushure mekupedza mutambo, tinya "Mitambo" kutamba pane mamwe mepu.
Onawo iyo Mahofisi Mahjong anotonga kana iwe uchida kuziva iyo mutemo wepasi rese wepamutemo yemutambo uno unozivikanwa.
Chii chinonzi Mahjong?
Mah Jong ari jMutambo wechiChinese mavambo unotambwa nevatambi vana uye ndomumwe wemitambo inonakidza uye inokosheswa nhasi. Ndiwo mutambo wekuverenga, hunyanzvi uye zano uye mutambo wacho wakafanana chaizvo newa domino.
Mutambo une Zvidimbu zana nemakumi mana nezvina uye izvi zvine mavara uye zviratidzo zveChinese, iyo inobvumidza kuitika kwemasanganiswa akasiyana siyana. Nekudaro, kune mamwe madunhu akasiyana anoshandisa imwe nhamba yezvikamu.
Chinangwa chikuru chemutambo ndechekuve wekutanga kugadzira ruoko rwakakodzera runosangana nezvidiki zvezvikamu zvinodiwa. Iko kukosha kweruoko kunochinja uye kunotsanangurwa nekuoma kwemisanganiswa inoigadzira.
Mahjong Historia nhoroondo
Nhoroondo yemutambo Mahjong inyaya inopokana kwazvo pakati pehunyanzvi. Vamwe vanofunga kuti rakadaro makore anodarika mazana maviri nemakumi mashanu uye vamwe vanoti zvinobva muzana ramakore rechi 2500 kana rechiXNUMX. Pamberi pezana ramakore rechiXNUMX, zvisinei, hapana zvinyorwa zvezvakaitika kare.
Zvinoenderana nengano yechiChinese, muzivi weChinese Confucius Aive nechekuita mukugadzirwa kwemutambo webhodhi. Nekudaro, hapana humbowo hwesainzi hweizvi. Iyi ingori ngano kana ngano ine zvinotevera zvirimo:
Mukadzi akanaka aive akasurukirwa akambogara mudare raMambo Wu. Ndakapotsa ndabhowa kusvika pakufa. Rimwe zuva akatanga kuveza zvivezwa kubva kumushenjere nenyanga dzenzou zvakaita sematombo edomino. Achipedza akauya nevasikana vake ndokutanga kutamba navo. Confucius anonzi akagadzira mutambo uyu kumberi.
Inoturikirwa kubva kuChinese zvinoreva kuti "Mahjong" pamwe ne "shiri duku iri kutaura"uye, maererano nengano, mutambo webhodhi wakagamuchira zita iri nekuti a Confucius aifarira marudzi ese eshiri. Nenzira, chete vanokudzwa ndivo vaibvumidzwa kutamba mutambo. Kana vanhuwo zvavo vairidza, vaityora mutemo.
Vanyori venhoroondo, kune rimwe divi, vanotenda kuti mutambo we mahjong yakatanga kubva kumitambo yekare yemakadhi eChinese yakanyorwa muChina muzana ramakore regumi neregumi nerimwe. Ivo vanoteedzera kwakatangira mutambo kunzvimbo dze Shanghai, Anhwei uye Kiangsu, sehuchapupu hwemitambo yemakadhi yakadaro yakawanikwa pano.
Mahjong mutambo zvidimbu 🀄🀩
Iyo seti yenguva dzose ine 136 kana zvidimbu zana nemakumi mana nenomwe. Mahjong seti akapatsanurwa muzvikamu zvakasiyana:
Bvisa zvidimbu "Denderedzwa"
Bvisa zvidimbu "sengere".
Bvisa zvidimbu "Unhu".
Zvidimbu zveDragoni nhatu.
Mahjong online mutambo
Mahjong ichiri kutambwa se yechinyakare bhodhi mutambo. Nekudaro, mitambo yepamhepo payakanyanya kufarirwa, hazvina kutora nguva kuti mavhezheni akasiyana eMahjong aoneke paInternet.
Nhasi, mutambo webhodhi mune yayo online vhezheni ndiyo imwe yemitambo inonyanya kufarirwa uye, semutambo wekupenya, inowanzo kupihwa mahara. Saka iye mahjong mutambo inowanikwa semutambo wepamhepo mumhando dzakasiyana siyana dzakasiyana nemhando dzakasiyana dzemota. Shanduro dzakakurumbira dzemutambo wechivanhu nhasi dzinosanganisira:
Dema uye chena 2
Nheyo yekutanga yemutambo ndeyekuti zvidimbu zvese zvinofanirwa kujekeswa zviviri zviviri panguva ipi neipi. Zvese iwe zvunofanirwa kuita ndeye tinya peya inoenderana (zvakafanana maficha). Zvisinei, matombo anogona kungobviswa chete kana asina kuvharwa nerimwe dombo.
Unofanirwa kusiya wakasununguka kune rimwe divi. Zvichienderana nekuti matombo anowanikwa sei, zvirokwazvo zvinogona kuitika, hapana mamwe mapara pachena. Mutambo wapera. Mutambo uyu unongodzorwa negonzo.
Imwe mukana weiyo Mahjong mutambo ndeyekuti haingosimudzira kufunga zvine musoro, asiwo kugona kuisa pfungwa uye kurangarira.
Mhando dzakasiyana dze Mahjong
Zvinoenderana nezvakanyorwa, vatengesi veChinese vakauya nemutambo kunyika dzekumadokero. Mitemo yakasiyana uye nzira dzemutambo dzakagadzirwa pano. Mutengesi JP Babock aida kurerutsa mitemo ndosaka akaburitsa bhuku "Mitemo yeMah-Jong"Semhedzisiro, Mahjong yakawedzera kufarirwa.
Iyo American vhezheni yeMahjong yakaramba ichishandurwa uye inosiyana zvakanyanya kubva kune yekutanga vhezheni. Mitemo yetsika nemagariro yakagadziridzwawo kune dzimwe nyika dzakaita seJapan kana Great Britain. Iyo Hong Kong neCanton vhezheni yemutambo inotambwa kazhinji nhasi.
Mhando dze Mahjong nhasi🀧
Hong Kong Mhjong kana Cantonese Mahjong 🀄
Iyo yakanyanya kushandiswa fomu yemutambo iri Hong Kong Mhjong kana Cantonese Mahjong. Nekugadzirwa kwenzvimbo dzepamhepo dzekubhejera, Japan yakaunza kubhejera mudzimba dzayo, ichibvumira vatambi ku batanidza nevamwe vanobva kunzvimbo dzakasiyana dzenyika. Izvi zvakaita kuti mutambo uyu uwedzere kufarirwa, uye shanduro nyowani dzemutambo wakakurumbira dzakaburitswa zvakare.
Sezvineiwo, iyo yekutanga Chinese vhezheni yemutambo haisisiri kuitirwa kuChina. Kune vashoma chete vateveri vakavimbika vashoma kuMadokero.
MuChina, pamwe neHong Kong, shanduro yakashandurwa yemutambo inozivikanwa kwazvo. Vamwe post-1930s shanduko dzakaita Mahjong mutambo unozivikanwa wekubhejera. Kusiyana nemimwe mitambo yemukana, Munhu haakwanise kuhwina mutambo weMahjong nekuda kwekuti aive nerombo rakanaka.
Mutambo unoda zano, kumhanya uye kuongororwa kwevamwe vatambi kuti vabudirire. Izvi zvinovimbisa Mahjong nzvimbo iri nani uye yehungwaru kupfuura mimwe mitambo.
Musiyano neMahjong ndewekuti iwe unogona kutamba wega. Iwe unofanirwa kubvisa ese akafanana mataira kuti uve Mahjong master. Basa rako ndere kutsvaga uye kubvisa zvidimbu zvinoenderana kuti uwane zvibodzwa. Tanga kubva kumusoro uye kwekunze matanda, uye shandira wakananga pakati. Start pamusoro kana pasina anoshanda anofambisa akasiya!
Mahofisi Mahjong anotonga
Kuti utambe Mah Jong nenzira kwayo, unofanirwa kunzwisisa uye kuisa mukati mayo pfungwa dzayo huru. Heano epamutemo Mahjong anotonga. Ruzivo rwese rwurimo muchinyorwa chino rwakatorwa kubva kumitemo yeInternational Mahjong.
Tinovimba iwe unogona kutora mukana izere nazvo. 🙂
Chii chaunoda kuti utange kutamba Mahjong?
144 kana 136 Mahjong matombo
Mah Jong, mutambo unogadzirwa ne 144 zvikamu. Mune ese iwo pane akati wandei maChinese mavara uye zviratidzo zvinobvumidza kuzadzikiswa kwemasanganiswa akasiyana siyana. Zvidimbu zvinoumba mutambo weMah Jong zvinotevera:
Iwo mataira akajairwa akaverengwa kubva pa1 kusvika pa9, uye akaiswa muzvikwata zvitatu.
Denderedzwa kana mabhora
Pamakadhi ega ega pane mana akafanana (ndiko kuti, tichava nawo, semuenzaniso, makadhi mana eVatatu vevatambi). Kazhinji tokeni inonziwo nemamwe mazita:
Kumachipisi Uno y Pfumbamwe (1 ne9) yesutu imwe neimwe inonzi "Zviteshi".
Kune machipisi pakati pe shure and the Eight (2-8) yesutu yega yega inozivikanwa se "Zvakareruka".
Tinogona kuwana maviri marudzi akasarudzika machipisi:
Maruva uye Zviratidzo zveMwaka
Aya mataira anonzi akakosha nekuti anohwina zvakasiyana kubva pane zvakajairwa.
Honors tokeni anowanzo ari akakosha tokeni mumutambo, kwete chete iwo akakosha akawanda mapoinzi, asi iwo dzimwe nguva anowedzera kukosha kweiyo yakazara zvibodzwa muruoko.
Ruva uye chiteshi zviratidzo zvinofanirwa kuratidzwa nekukurumidza kana iwe uchinge waenda, uye ivo vanongoshandiswa chete kuwana mamwe mapoinzi, uye tora imwe chiratidzo zvakare. Ivo havawanzo kukanganisa mutambo pachawo zvakanyanya, ndosaka vachinzi zvakare "mabhonasi machipisi".
Kune yakawanda Mahjong mitemo isingatarise maruva uye mwaka mataira, uchiabvisa kubva mumutambo.
Pakati peanokudzwa tokeni tinogona kusiyanisa mhando mbiri
Shato: tsvuku, girini uye chena.
Mhepo: kubva kuMabvazuva, kubva kumaodzanyemba, kubva kuMadokero nekuNorth.
Sezvo nematanho akajairwa, yega yekukudzwa tokeni inodzokororwa kana (saka kune mana Maodzanyemba Mhepo tokeni, semuenzaniso).
Chekupedzisira, isu tine maruva uye mataira emwaka, ayo anowedzera anosvika kune masere mataira:
vana maruva: vanowanzo kuve nemapikichagiramu mubhuruu kana nhema, uye akaverengerwa mutsvuku.
vana mwaka: vangangoita nguva dzose vane mapikicha ari mutsvuku, uye akaverengwa mubhuruu kana nhema.
Maruva nemwaka zvine hukama hwakanangana nemhepo, uye zvinoshandiswa mukumaka sematoni ebhonasi maringe nemhepo yega yega:
La ruva 1 and the chiteshi 1, zvine hukama nemhepo Este.
Ruva 2 and the chiteshi 2, nemhepo pamusoro.
Patinotaura nezve ruva ruva 3 and the chiteshi 3, nemhepo Oeste.
La ruva 4 and the chiteshi 4, nemhepo North.
Chinangwa chemutambo ndeichi tora mapoinzi akawanda sezvinobvira Kuwanikwa "Kugadzira Mahjong".
Kuti uite Mahjong muRCM zvinodikanwa kuve nazvo 8 points zvirinani (kusasanganisira maruva / mwaka mapoinzi), saka iwe unofanirwa kuziva mafambiro chaizvo.
Mutambo wakazara weMahjong une maoko gumi nematanhatu kana mitambo, yakakamurwa nemativi 4 kutenderera kwemitambo mina imwe neimwe.
Kunyangwe mutambo uzere uine gumi nematanhatu maoko kana mitambo, mumitambo yakawanda inotambwa nenguva. Kazhinji, iyo mitambo ingave maminetsi makumi mapfumbamwe kana maawa maviri.
Denderedzwa rega rega rine mhepo yakabatana, iyo inoshandiswa kumisikidza zvibodzwa pakupera kwemutambo wega wega, uye inonzi chii mhepo inokunda:
1st kutenderera: Mhepo yekumabvazuva
2nd kutenderera: Mhepo yekumaodzanyemba
3st kutenderera: West Wind
4st kutenderera: North Wind
Mhepo dzedenderedzwa rega rega hadzikanganise mutambo wacho zvakananga, zvibozwa chete. Pakupera kwetenderedzwa yega yega, a kuchinja zvigaro.
Kugovaniswa kwemhepo kunoitwa kamwe chete, uye zvisina kujairika, pakutanga kwemutambo.
Mhepo yega yega inopihwa nzvimbo yakamisikidzwa. Kumabvazuva kunofanirwa kuve neSouth kurudyi kwayo, iyo yekuchamhembe kuruboshwe kwayo uye iyo West yakatarisana nayo.
Ziva kuti haibvumirane nemakadinali zviratidzo!
Zvichienderana nemhepo yamubata, mutambi wese anofanira kugara zvinoenderana nenzvimbo iyoyo. Kugovaniswa kwemhepo kunogona kuitwa nenzira dzakawanda, asi zvakapusa ndeizvi:
Kukanda dice mutambi wega wega uye kupa nhamba nemhepo (1 = Kumabvazuva, 2 = Maodzanyemba, 3 = Kumadokero, 4 = Maodzanyemba uye 5,6 = Tora zvakare).
Kuisa chidimbu chemhepo imwe neimwe chakatarisa pasi, uye mutambi mumwe nemumwe achisarudza chidimbu.
Pamberi pemutambo wega wega
Rusvingo runosanganisira 18 zvidhinha de 2 tokens yakakwira, ichigadzira mraba, uye inofanirwa kuvakwa pakutanga kweruoko rumwe nerumwe mumutambo.
Mutambi wega wega anofanira kugadzira chikamu chavo chemadziro nekuisa pamwechete mutsara 18 mataira akareba uye maviri mataira akakwirira, ese akatarisana pasi.
Kana mumwe mutambi achinge avaka divi ravo remadziro mhedzisiro yacho inofanirwa kuve chibairo chemablock gumi nemasere x 18 mabhuru.
Usati wagovera iwo ma tokeni, zvinodikanwa kuti uone divi remadziro ratiri kuzotanga kugovera.
Kuti uite izvi, mutambi Este ichavhura madhayeti maviri, iyo icharatidza divi remadziro panotangira kugoverwa kwemachips.
Kuti uzive chikamu chemudhuri panotangira kugoverwa, chinoverengerwa kutanga kubva kuMabvazuva uye uchiteedzana muhurongwa hwemutambo (zvinopesana newachi). Naizvozvo, iwe unozotanga nechikamu chekumabvazuva chemadziro kana iwe ukakungurutsa 5 kana 9 nedhaisi, nechikamu chekumaodzanyemba kana ukapeta 2, 6 kana 10, zvichingodaro.
Mumuenzaniso wedu, mutambi weEast akamonera 6 uye 5, zvichiratidza kuti madziro achavhura kudivi remutambi weWest (6 + 5 = 11).
Mutambi aripo pamberi pechidziro chemadziro pachichaitwa zororo iri ndiye anotarisira kupfura vamwe 2 madhiri izvo zvicharatidza block yematiles iyo iyo madziro ichavhurika (ndiko kuti, iyo block kubva iyo mataira ichatorwa). Mumuenzaniso wedu mutambi weWest.
Kugovaniswa kwemachipisi kunoitwa nemutambi wega wega achitora bhuroko rake remachips.
Yekutanga block ichave inotevera kune huwandu hwehuwandu hweaya mana akakungurutswa (iwo mairi maviri kuziva divi remadziro kubva panotangira kugoverwa uye imwe mbiri dice yekuziva iyo block).
Zvinotanga kuverenga kubva kurudyi kuenda kuruboshwe padivi remadziro inoratidzwa nemadhizai ekutanga maviri (kubva pakuona kwemutambi ari pachikamu chemadziro chaanovhura. Kwedu, mutambi weWest). Iye anotora iyo chinotevera block kubhokisi wedzera iwo mana madhiri.
Cherechedza: Ziva kuti inogona kunge iri nyaya yekuti huwandu hwedhikisi ina hwakakura kupfuura gumi nesere (inova hupamhi hwerimwe divi remadziro). Muchiitiko ichocho, yekutanga block padivi rinotevera remadziro inoenderera ichiverengerwa kudzamara huwandu hwedhaidhi hwasvika.
Mumuenzaniso wedu, iyo yekuMadokero yakamonera imwe 2 dice uye 4 uye 5. Saka, kugoverwa kwemachipisi kwaizogadzirwa kubva kublock inotevera 20 (6 + 5 + 4 + 5 = 20). Ndokunge, iwe waizotanga kutora mataira kubva kumadziro kubva kublock padhuze nenhamba makumi maviri, uchiverenga kubva kurudyi kuenda kuruboshwe (kubva kuWest player maonero) kubva kubhokisi rekutanga kudivi reWest player.
Iyo tile isati yatanga yekugovera tile ichave iyo yekupedzisira tile pamadziro.
Mumuenzaniso wedu, yekupedzisira tile pamadziro ndiyo yepamusoro tiles ye block 20 (mubhuruu), uye bhokisi kubva kwarinotorwa mataira ndiro red tsvuku.
MuRCM hamuna rusvingo rwakafa.
Mutambi weEast aigona kutora maviri ekutanga emabhuru (mune ese mana tokeni).
Iyo block ine chiratidzo chekupedzisira inowanzo shandurwa (asi isingadiwe) kuratidza zvakajeka kuti iro divi remadziro ndiko kuguma. Iri bhagi rinogona kushandurwa nechero mutambi (kazhinji mutambi pamberi pebhokisi iri kana mutambi weEast iye).
Ipapo mutambi weSouth anotora mabhureki maviri anotevera.
Ipapo mutambi weWest aigona kutora maviri anotevera.
Ipapo mutambi weNorth mabhureki maviri anotevera.
Gare gare, mutambi weEast aizopihwa mamwe mabhuroko maviri.
Uye zvichingodaro kusvikira mutambi wega wega atora mabhureki avo matatu ematiles mana (ndiko kuti, panguva iyoyo mutambi wega wega anofanira kunge aine mataera gumi nemaviri).
Chekupedzisira, iyo yekuEast player inotora mataira maviri (iwo epamusoro mataira emabhuroko akaratidzirwa mutsvuku).
Uyezve vatambi vekuSouth, West neNorth vaitora chiratidzo chimwe chete.
Pakupera kwechibvumirano, mutambi wega wega anenge aine gumi nematanhatu machipisi, kunze kweEast, anozove ne13.Mutambi anova East anoisa dhadha kurudyi rwake kuratidza kuti ndiye East.
Yakasarudzika Chinese Mitemo Rakafa Rusvingo Token Deal
El bvisa kubva kwaunotanga kutora machipisi ndicho chinzvimbo chiri muchinzvimbo chinoratidza kuwanda kweiyo madhayeti matatu akakungurutswa pamberi.
Se kuverenga kubva kurudyi kuenda kuruboshwe kubva pakuona kwemunhu kudivi iro remadziro.
Mumuenzaniso wedu, yekutanga block ndeye block 12 kuchamhembe kweiyo madziro emutambi. Ndokunge, iwe waizotanga kutora mataira kubva kumadziro kubva kublock 12, inova iyo tsvuku bhuru mumufananidzo.
Paunenge iwe waziva kubva kwauri kuenda kuti utange kutora mataira, pane boka remataira risingakwanise kushandiswa kuba zvakajairwa mataira mukati memutambo wese. Aya ma tokeni anonzi rusvingo rwakafa, uye ndizvozvo 14 tokens (ndokuti, mabhuroko manomwe) ayo anongoshanda kutora mamwe machipu.
Nguva dzose ndinofanira kugara 14 akafa madziro tokeni. Naizvozvo, iwo madziro akafa achafamba sezvo mamwe mataira ekutsiva anotorwa kubva pairi. Kana rusvingo rwakafa rukasvikwa pasina kupedza mutambo, mutambo unozotarisirwa kupera pasina munhu akunda (iyi mamiriro anonzi ruoko rusina basa).
Mumuenzaniso wedu, ndiwo mataera gumi nemana (manomwe mabhuroko) kurudyi kubva kune yemba tile. Iwo ndiwo mabhuruu ebhuruu.
Kamwe iyo yekutanga block painosimbiswa, chip chip chinotanga. Mutambi wega wega anotora matombo avo ematanho sezvatsanangurwa pamusoro *.
Tisati tatanga, isu tinofanirwa kuyeuka kuti kune matatu ekutanga musanganiswa kana kufamba muMahjong, asi kuti tigone kuagadzira, mimwe mitemo inofanirwa kuteverwa:
Ndicho 3-tile yakatwasuka akateedzana e sutu imwechete (Ojo, 3 mataira chaizvo, haana kukodzera masitepisi e2 kana mana mataira).
Inogona chete kuumbwa:
nekurasa kwemutambi kuruboshwe
kana nema tokeni akatorwa kumadziro.
Kunze: Kana iwe uchingoda chete kuita Chi kuti uwane Mahjong, unogona kuzviita nechidimbu chakaraswa nechero mutambi (hazvidi kuti uve kuruboshwe).
Iko kusanganisa kwe 3 mataera anowirirana.
Inogona kuumbwa nekurasa chero mutambi.
Iko kusanganisa kwe 4 mataera anowirirana.
Kana iwe waburitsa pachena a Pung uye iwe ukadhirowa kubva pamadziro chiratidzo chakaenzana neicho chePung, unogona kuwedzera iyo Pung uye kuumba Kong. (Ojo, haugone kuumba Kong nenzira iyi nemumwe mutambi arasa. Kamwe kana Pung yaburitswa, inogona kungowedzerwa kuKong nechiratidzo chaunowana)
Kana iwe uine mataira mana anowirirana muruoko rwako, kuitira kuti ivo vaverenge seKong unofanira kuiratidza. Iwe unofanirwa kuisa zvidimbu zvina zvakatarisa pasi (zvakavanzika, usingazive kuti chii) uye uzvizivise seKong. Iyi Kong, uko mana ma tokeni akabatwa muruoko uye ma tokeni akaimbwa asi asina kuratidzwa, anonzi Yakavanzika Kong.
Mutambo unoitika mukuchinjana, uye unogara uchiitika munzira imwechete: kurwisa wachi. Tevedza kuteedzana: East-South-West-North-East -..., zvichingodaro.
Iyi pfungwa yemutambo inogara ichiteverwa, kunze kwekunge mutambi uyo aisazowana mukana wake achida kuti tile iraswe nemumwe mutambi kuti aite Pung, Kong kana Mahjong.
Muchiitiko ichocho, hurongwa hwatyorwa uye mutambo waizoramba uchienderera kune iye mutambi, asi zvozopfuurira zvakare mupfungwa yekuti isu takaratidza kubva kumutambi iyeye.
Semuenzaniso, mutambi wekuMabvazuva anokanda chiratidzo chinodiwa neWest player. Muchiitiko ichocho, pfungwa yakaputsika (sezvo ichifanira kuve chijana chemuSouth player), uye mutambo waizoteverwa neWest player, uyo mushure mekutora tile yakaraswa, aikanda imwe yema tile ake, uye mutambo waizoenderera kuNorth player. .
Mushure mekugovera machipisi
Kamwe kana matokeni aparadzirwa, maruva uye chiteshi zviratidzo izvo mutambi wese anazvo, uye inogona Kong, inofanirwa kuratidzwa (kutevera odha)
Maruva nemwaka zvinoratidzwa pakutanga, kwozotevera Kong.
Kutanga nemutambi weEast uye kufamba munzira yemutambo (Kumabvazuva-Maodzanyemba-Kumadokero-Maodzanyemba), vatambi vazivisa iwo Ruva uye Zviratidzo zveMwaka zvavanazvo, vachivaisa kumeso pamberi pavo uye kurudyi.
Kune Ruva rega rega uye Chiratidzo cheMwaka chakaratidzwa, mutambi wega wega anotora chiratidzo chitsva kubva kumadziro.
Iwo mamwe ma tokeni anotorwa kubva kumadziro kune maruva / mwaka kana Kong inonzi kutsiva kana kuwedzera machipisi. Dzinotsiva machipisi dzinotorwa kubva kudivi kuguma kwemadziro. Mumuenzaniso wedu, nekuda kwebhuruu color block.
Kana paine chero mataira matsva aive mamwe maruva eMaruva neMwaka, yaizoratidzwa uye imwe tile yaizotorwa kubva kumagumo emadziro, zvichingodaro.
Iko hakuna kusungirwa kuratidza pakarepo kana maruva / mwaka mataira kana iyo Kong. Vanogona kuratidzwa chero nguva panguva yemutambo chero bedzi mutambo usati wapera.
Mutambo unotanga nekurasa kwe tile neEast player (yeuka kuti iyo East inotanga nematombo gumi nemana, nepo vamwe vese vatambi vachitanga ne14).
Mutambo unovandudzwa nguva dzose uchitevera pfungwa yakatsanangurwa, uye unongovhunika kana mutambi asina mukana achida tile yakaraswa yekugadzira Pung, Kong kana Mahjong. Zvino zvaizoenderera zvekare kune iye mutambi, zvichitevera pfungwa imwecheteyo yemutambo.
Mutambo unopera kana mutambi achigadzira Mahjong kana mataira ari kumadziro apera.
Nguva yega yega mutambi paanorasa tile, vanofanirwa kuiisa vakatarisa pamberi pechinzvimbo chavo (uye icharamba yakadaro nenzira yemutambo wese), mumitsara yakarairwa yetiles nhanhatu (mutsara wekutanga uri pakati pechikamu chetafura uye zvinotevera zvakanyanya padyo).
Hapana chiratidzo chinoshevedzwa. Musanganiswa chete unogadzirwa nezvidimbu zvakaraswa nevamwe vatambi, maruva / zviteshi kana Kugadzira Mahjong (zvinonyatsoratidza Chi, Pung, Kong, Ruva kana Mahjong / Hu) zvinotaurwa zvinonzwika.
Kana mutambi achida kutora chiratidzo (uye achigona kuitora) anofanira kutaura achinge angoraswa, kunyangwe isiri nguva yake.
Tile rakaraswa rinogona kutorwa kungoita mubatanidzwa, iyo inofanirawo kuratidzwa yakatarisana kumusoro kune vamwe vatambi.
Tarisa! Iwe haugone kutora tile yakaraswa kungo unganidza, pasina kugadzira mutambo.
Kamwe kana tile yakaraswa ikasatorwa nemumwe munhu, haigone kushandiswa kune wese mutambo (ndokuti, kana gare gare isu takafarira matai akaraswa maoko pamberi, hatizokwanise kuatora).
Mushure mekurasa kwese
Mushure mekurasa chiratidzo, zvinhu zvitatu zvinogona kuitika:
Mutambi anoda kuti tile yakaraswa ipedze Pung kana Kong kana kuita Mahjong.
Unofanira kuzvitaura nekukurumidza kana waraswa, kunyangwe isiri yako nguva.
Iwe unofanirwa kufumura mutambo kuitira kuti ugoonekwa nevamwe vese vatambi panguva yasara yemutambo.
Iye zvino marongero ekutamba aizoenderera kune uyu mutambi, uyo anofanirwa kukanda chiratidzo.
¡Ojo, mutambi anokwevera tile yakaraswa haakwanise kutora tile kubva kumadziro! (Kunze kwekuita Kong)
Kana akaita Mahjong, achasiya iro rakabiwa iro raanovhara naro akarara pasi, achiumba mubatanidzwa waanokunda.
Mutambi kurudyi kweanorasa anoda kuti chiratidzo chiumbe Chi.
Inofanira kutaura saizvozvo painongoraswa.
Chekupedzisira, mutambi anofanirwa kukanda tile (Rangarira, mutambi anodhonza tile yakaraswa haatore kubva kumadziro, kunze kwekunge yaumba Kong).
Hapana mutambi anoda chiratidzo.
Iyo tile yakaraswa haigone kushandiswa kune yakasara yemutambo.
Anotevera mutambi muhurongwa hwekutamba aigona kutora tile kubva kumadziro uye anofanira kurasa imwe tile.
Irwira tile yakaraswa
Kana anopfuura mumwe chete mutambi anoti chiratidzo chimwe chete, marongero aunofarira ekutora chiratidzo anozotevera.
Mutambi uyo anoda kuti chiratidzo chiitwe Mahjong (o Hu).
Kune mutambi anoda chiratidzo che Pung kana a Kong.
Kune mutambi anoda kuti chiratidzo chive fomu Chi.
Cherechedza: Kana vaviri kana vanopfuura vatambi vachida yakafanana tile kuti vaite Mahjong, mutambi ane nguva yake yekutanga anokunda mupfungwa yakajairika yemutambo. Mutambi mumwe chete ndiye anogona kukunda.
Kuba kwe tile yakaraswa
Kana mutambi achitora chiratidzo chakaraswa nemumwe, anofanirwa kurovera pasi chakabiwa, achichiisa kuitira kuti zviratidze kuti ndiani akamupa.
Semuenzaniso, kana mutambi achidhonza chiratidzo chakaraswa ne mutambi kuruboshwe (3 ye Bamboo kana 9 yeDisc), iwe unofanirwa kusiya mubatanidzwa mukutarisa nechiratidzo chakakweverwa chakatendeuka ndokuiswa kuruboshwe:
Kana mutambi achidhonza chiratidzo chakaraswa ne mutambi kumberi (a 9 maDisc), iwe unofanirwa kufumura kusangana pamwe neiyo tile yakabiwa yakashandurwa ikaiswa pakati.
Kana mutambi achidhonza chiratidzo chakaraswa ne mutambi kurudyi (a 9 maDisc), iwe unofanirwa kusiya mubatanidzwa mukutarisa neiyo yakabiwa chip yakashandurwa ikaiswa kurudyi.
Mushure mekuumba musanganiswa wakadhonzwa nechiratidzo chakaraswa nemumwe mutambi, mubatanidzwa iwoyo unofanirwa kusiiwa uchiratidzwa kune wese mutambo mumutambo. chikamu chakarurama yemutambi akaiumba.
Ndokunge, maruva / zviteshi uye iyo Kong, pamwe nemusanganiswa nematiles akaraswa, akasara kurudyi kwemumwe mutambi.
Kana mataira ari pamadziro apera uye pasina munhu anokunda mutambo wapera. Iyi mhando yemitambo inonzi ruoko rusina basa.
Kune rimwe divi, kana mutambi achigadzira Mahjong, anofanira kuverenga mapoinzi ake ese zvinonzwika (kunyangwe iwo maruva emaruva), achitora mataira ake akaraswa pamubatanidzwa wega wega kana mataira anowona (kwese poindi tara yakaraswa kana kune ese gumi anonongedza tile kurasa kumeso pasi).
Kutanga, iwo mapoinzi pamutambo wese akawedzerwa, kujekesa kuti iwo mashoma masere masere anosvika. Ipapo poindi dzemaruva dzinowedzerwa.
Izvi zvinoitirwa kujekesa kuverenga kuri patafura pasina kushandisa penzura uye pepa kumaakaundi.
Semuenzaniso, kana mutambi akarova zvibodzwa gumi nezviviri (nekuverenga iwo maruva poindi), anofanira kutora gumi nemaviri tokeni kubva pakurasa kwake:
Aigona zvakare kutora matatu mataira (3 kumeso pasi = gumi mapoinzi, 1 kumeso kumusoro = 10 poindi imwe neimwe)
Cherechedza: Kamwe mutambi paanoti Mahjong, vamwe vese vatambi havafanirwe kuratidza mataira avo kana kukanganisa mataira akaraswa kudzamara poindi dzese dzave kuverengwa.
Mushure mokunge mutambo wega wega wapera (kunyangwe mumwe munhu achikunda kana paine ruoko rwusina chinhu), mhepo dzakabatana nemutambi wega wega dzinotenderera (mhepo, kwete vatambi, kunze kwekunge denderedzwa rapera).
Mutambi aive East anova North, iye aive South anova East, West anova South uye North kusvika West.
Panopera denderedzwa rega rega
Pakupera kwetenderedzwa yega yega, pamusoro pekutenderera nemhepo, pane chinjana munzvimbo dzevatambi. Icho chinangwa neichi chigaro chinoshanduka ndechekuona kuti mutambi wega wega akasiya uye kurudyi kune mumwe wevamwe vatambi mumutambo wese.
Pakupera kwekutenderera kwemabvazuva mhepo uye usati watanga kutenderera kwemhepo yekumaodzanyemba, mutambi aizove East zvakare uye uyo angave weSouth vakachinjana zvigaro zvavo. Vatambi vekuMadokero neNorth vanochinjanisa zvigaro zvavo.
Pakupera kwekutenderera kwemhepo yekuSouth uye usati watanga kutenderera kwemhepo yekumadokero, mutambi anga ave East angaenda pachigaro cheWest player, uyo angave weSouth kune uya weNorth player, West player kuSouth uye kuchamhembe kuEast.
Pakupera kwekutenderera kwemhepo yekumadokero uye usati watanga kutenderera kwemhepo yekuchamhembeMutambi anozove East uye uyo angave weSouth akachinjana zvigaro zvavo. Saizvozvo, vatambi vekuMadokero neNorth vaichinjanisa zvigaro zvavo.
Zvinogona kutaridzika kunge zvinokanganisa (uye zvirizvo), asi nenzira iyi vese vatambi vanochinja vadzivisi vavo kubva kuruboshwe kurudyi, nekudaro vachidzivirira dhirowa yemhepo pakutanga kwemutambo kubva kumaka vavakidzani vedu kumutambo wese.
Cherechedza: Imwe nzira yekuziva kana chigaro shanduko chaitwa nemazvo ndechekuti mutambi akasvika kuSouth pakunzvenga mhepo anofanira kunge ari mutambi weEast pakutanga kweSouth round. Uyo akawana West anofanira kunge ari East kana achitanga iyo West denderedzwa, uye ani naani akawana North aizove achitanga iyo yekuNorth kutenderera.
Ratidza maruva ekutanga
Mutambi wega wega, anofanirwa kuratidza kuti ane maruva here (nekudana "Ruva" kana "Ruva") kana kusava nemaruva ("Handina", "Handina maruva" kana "Hakuna maruva"). Mushure mekutora maruva tokeni kubva kumagumo emadziro, mutambi wega wega anofanira kushevedzera kuti havasisina maruva ("Hapasisina maruva" kana "Hapasisina maruva").
Mutambi Este Iye ane Chiratidzo cheMaruva neMwaka, saka aizozviratidza nekuchisiya kurudyi kwake uye otora chimwe chiratidzo kubva kumagumo emadziro (anowana mashanu maDiski). Paakangotora chiratidzo chekuwedzera, mutambi weEast anofanira kutaura zvinonzwika kuti haasisina maruva.
Apo yaive nguva yemutambi pamusoro Ndinofanira kutaura zvinonzwika kuti haina maruva.
Sezvo kuEast, mutambi Oeste, ine maruva uye tokeni yemwaka (iine maviri maruva tokeni), uye kana uchitora mamwe mataera kubva kumadziro, maviri akafanana mataera e2 eVanhu aibuda. Mushure mekudhirowa mataira ekutsiva, iyo West inogona kuti haina maruva.
Ipapo yaizove nguva yemutambi North. Iyo hainawo maruva, saka inogona kutaura zvinonzwika kuti haina maruva.
Mutambi weEast ndiye wekutanga kurasa tile. Iye wekuEast mutambi anokunguridza bamboo tokeni 3, achiiisa pamberi pake:
Sezvo iyo 3 bamboo tokeni iri kudiwa neSouth player uye pasina mumwe munhu anoikumbira, anoitora ogadzira Chi (2-3-4 ye Bamboo), achiisiya kuruboshwe rwake achitarisa uye ne3 yaBambo akatendeuka (achisiya chiratidzo kuruboshwe chinoratidza kuti ndiye mutambi kuruboshwe kwake, kuMabvazuva, akaikanda).
Sezvo maSouth atora kurasa, haigone kuba kubva kumadziro. Iye zvino anofanirwa kurasa chiratidzo, uye kumonera iwo ma9 eDenderedzwa.
Nekudaro, iyo 9 yeCircles tokeni inonakidza kuNorth player kuumba Kong. Naizvozvo, mukana weWest player waizobvaruka, uye mutambi weNorth airatidza mafambiro ake (anofanirwa kuratidza iyi Kong, nekuti haina kuvanzika), achichinja imwe yaMambo 9 pakati pekubatanidza (sezvo akaikanda mutambi ari pamberi pake, Maodzanyemba) uye aigona kutora imwe chiratidzo kubva kumagumo emadziro (kubvira mushure mekuumba Kong, chimwe chiratidzo chinofanira kudhonzwa kubva kumagumo emadziro). Iye anowana iwo manomwe eChinhu.
Kunyangwe ikozvino raizove mukana weNorth player kukanda chiratidzo, anofunga kufumura yakavanzwa Kong (saka anotendeuka mana tokeni akatarisa pasi) uye otora imwezve chiratidzo.
Mushure mekutora chikwangwani chake kubva kumadziro (anowana 1 emaSekondi), mutambi weNorth anofanira kurasa chiratidzo, mushure meizvozvo, dai zvaisafadza chero munhu, mutambi weEast airidza, achitora chiratidzo kubva kumadziro, zvichingodaro. Mutambo wapera kana mutambi achigadzira Mahjong kana mataira ese ashandiswa kumusoro (hapana ruoko).
Vanotamba nezvikoro zvavo
MuRCM mune mitambo makumi masere nemasere, yakakosha kubva pa81 poindi kusvika makumi masere nemasere. Dzinodiwa 8 points kukwanisa kuita Mahjong.
Kana mutambi akavhara netirairi yakaraswa nemumwe, iye anotambira kubva kune iye mutambi zvibodzwa zveruoko rwake, uyezve akawedzera mapoinzi masere kubva kune vese vatambi (kusanganisira uya akakanda tile raibvumidza kuvhara).
Kana akavhara netaira yakadhirowewa kumadziro, anowedzera mapoinzi masere kuchikwata chake uye anotambira huwandu uhu kubva kune mumwe wevapikisi vatatu.
rasa Kubva kumadziro
Rasa Points Winner + 8 -
Zorora 8 -
zvose - Points Winner + 8
General zvimiro musanganiswa wemitambo
Kuverenga mitambo iyo inosanganisira vamwe
Kana danho risingakwanise kuitwa pasina kusanganisa imwe, iko kufambisa kwakatosanganisirwa hakuzopihwa.
Musimboti wekuregererwa kana kurambidzwa kwekudzokorora kushandiswa kwemutambo
Kana maviri kana matatu mubatanidzwa ukashandiswa kuita kufamba, yakakwira yeimwe yemasanganiswa iyi inogona kushandiswa kushandiswa nemamwe mabatanidzwa uye kugadzira danho idzva.
Vanogona kuwedzerwa: 1 poindi yeVaviri Yakachena Bamboo Terminal Chis, poindi imwe yeVaviri Yakachena Hunhu Terminal Chis uye chete poindi imwe yeMixed Double Chow (1-1-1 ye Bamboo uye 2-3-1 yeChinhu). Hazvingagone kushandisa 2-3-7 ye Bamboo uye 8-9-7 yeMavara zvakare kune imwe poindi neMixed Double Chow, sezvo isu takatoshandisa imwe yemubatanidzwa wemitambo Mitambo miviri Yakachena (iyo 8-9 -1, zvese zviri zveM bamboos uye Hunhu).
Mitambo inosanganisira ruoko rwakavanzwa
Mumitambo yakavanzwa nehunhu, mapoinzi haawedzerwe Ruoko Rwakavanzwa, kunyangwe iwo achigona kusanganiswa neRuoko rwakavanzwa zvachose.
Iyi mitambo ndeiyi: Yakasonerwa Chips ine Yakaderera Honours, Yakasimbiswa Chips ine Great Honors, 7 Pairs, 4 Yakavanzwa Pung, Mapfumbamwe Masuo, 7 Akateedzana Akachena Mapara uye 13 Nherera.
Mbiri Yakaratidzwa Kong inokoshesa mapoinzi mana.
Anofumurwa Kong inosanganiswa neHakavanzwa Kong inokosha mapoinzi matanhatu.
Mbiri Yakavanzwa Kong inokosha mapoinzi masere.
1 Pfungwa Inotamba
1. Zvakafanana Double Chi
Manera maviri eiyo sutu imwechete uye nenhamba dzakaenzana.
2. Yakapetwa kaviri Chi
Manera maviri emasutu maviri akasiyana, asi akaenzana manhamba.
3. Pfupi Stair
Vaviri Chis ye sutu imwechete, iine akateedzana manhamba.
4. Mbiri Yakachena Yemuchina Chis
Masitepisi e1-2-3 uye 7-8-9 yesutu imwechete.
5. Pung yeMatemu kana Mhepo
Ruoko rwune Pung yeTerminals (makaunda 1 ne9) kana Mhepo, kunze kwekunge iwo Wayo Wemhepo kana iwo Wakasimba Mhepo (iwo Mhepo wedenderedzwa).
6. Kong Yakafumurwa
Kong yakawanikwa kubva pachiratidzo chakaraswa kana kubva pakuwedzera chiratidzo kune yakatoratidzwa Pung. Ongorora: Kuraswa hakugone kukwewa kuti uwedzere Pung yakafumurwa.
7. Mhuri Isipo
Ruoko irwo rusina machipisi e1 eayo matatu marudzi emasutu. Ndokureva, ruoko riine masutu maviri chete. Inogona kutakura Honors.
8. Kwete Honours
Ruoko rwakagadzirwa nemasutu tokeni chete, pasina maHonors tokeni. Kureva, hakuna Mhepo kana maDragoni.
9. Edge Kumirira
Kumirira 3 kana 7 kugadzira Chi ine 1-2 kana 8-9. Ruoko urwu harubvumirwe kana rwuchisanganiswa nechero imwe mhando yekumirira (semuenzaniso, kumirira kuvhara ne7-7-8-9 machipisi kunoonekwa sekusanganiswa kweEdge Mirira uye Nyore Mirira, nekuti inogona kutariswa kuti iyo 7 ndeyekuumba 7-8- 9 kana vaviri 7-7).
Ongorora: Bata mapoinzi anongopihwa chete kana imwechete chiratidzo ichidikanwa.
Semuenzaniso, kumirira kuvhara uine chete Bamboo 7 ine:
10. Mirira Yakavharwa
Vhara neyakavharwa Mirira (semuenzaniso, uine 2-4 uye wakamirira 3). Ruoko urwu harubvumirwe kana ruchisanganiswa nechero imwe mhando yekumirira (semuenzaniso, kumirira kuvhara ne2-2-2-4 machipisi kunoonekwa sekunge mubatanidzwa weClosed Mirira uye Wakareba Mirira, nekuti ivo vanoshanda vese vari 3 uye 4). Nekudaro, kusanganisa Waits pa (semuenzaniso, 6-7-7-8-9 uye kumirira yegumi nematanhatu kunoonekwa sekusanganiswa kweEdge Mirira uye Yakavharwa Mirira, asi chete chiratidzo chisere chinoshanda kuvhara.
Semuenzaniso, kana ichigona chete kuvharwa ne5 yeSekete na:
11. Simply Mirira
Vhara nekadhi rinoita vaviri vacho. Kufambisa uku hakubvumirwe kana kuchisanganiswa nechero imwe mhando yekumirira (semuenzaniso, kumirira kuvhara ne2-2-2-4 machipsi kunoonekwa sekusanganiswa kweKakavharwa Mirira uye Nyore Mirira, sezvavanoshumira ese ari matatu uye 3). Izvo zvakare hazvigamuchirwe kana sarudzo mbiri dzichitarisirwa kuvhara nevaviri (semuenzaniso, 4-6-7-8 uye kutarisira 9 kana 6).
12. Vhara Rusvingo
Vhara nechiratidzo chakabatwa kumadziro.
13. Maruva uye Zviratidzo zveMwaka
Ruva rega rega rakakosha poindi imwe. Izvo zvinoverengerwa kumagumo ehuwandu hwemapoinzi ese. Ivo havasi vanoshandira iwo mashoma mamakisi e1 mapoinzi. Vanogona kuratidzwa pese paunoda. Ivo vakasara kurudyi (senge mamwe mafambiro uye akafumura mataira) uye tile nyowani inotorwa kubva kumagumo emadziro. Kana mutambi akavhara nechiratidzo chitsva, poindi inowedzerwa yekuvhara Rusvingo.
14. Pung yamakava
Pung (kana Kong) yeDragons. Inogona kuvanzwa kana kufumurwa.
15. Anodzora Mhepo Pung
Pung (kana Kong) yemhepo ine simba, inoenderana nemhepo yedenderedzwa. Inogona kuvanzwa kana kuratidzwa.
16. Pfuma Yemhepo Pung
Pung (kana Kong) yemhepo pachayo Inogona kuvanzwa kana kuratidzwa.
17. Ruoko Rwakavanzwa
Ita kuti musanganiswa wese uvande uye uvhare netaera yakaraswa.
18. Wese Chi
Ruoko runongova naChis chete uye haruna maHonji.
19. Yakavharwa Tab
Shandisa mataera mana etairi yakapihwa, pasina kuzivisa iyo Kong (ndiko kuti, kuishandisa kuita kumwe kufamba). Iyo yakavanzwa kana yakafumurwa Kong haina kuverenga seHoard Token.
20. Yakasanganiswa Double Pung
Ruoko rune maviri Pung kana Kong enhamba yakafanana (asi zviripachena yesutu dzakasiyana).
21. Paru Yakavanzwa Pung
Ruoko rune maPungs maviri asina kuburitswa (ndokuti, asina kuumbwa nematiles akaraswa). Kong yakavanzwa haina kukodzera yakavanzwa Pung.
22. Yakavanzwa Kong
Ruoko rune mataira mana anowirirana, hapana imwe yaro inorasa, uye yakaziviswa Kong. Ese mataira akatenderedzwa kumeso.
23. Zvese Zvakareruka
Ruoko rusina maTerminal tokeni kana Honor tokeni. Zvese machipisi ari muruoko zviri nyore (machipisi 2-8).
24. Renegated Ruoko rwezviteshi uye Honours (Zvese zvine Honours uye / kana maTerminal)
Ruoko runosanganisira imwechete Terminal tile kana imwe Honor mune yega yekubatanidza, kusanganisira vaviri vacho.
25. Ruoko Rwakavanzwa Zvakakwana
Ruoko rwakapedzwa nematiles ese akatorwa kuMadziro, kusanganisira vaviri vacho.
26. Kong Kong Yakafumurwa
Ruoko rune Kong mbiri dzakaratidzwa.
27. Yekupedzisira Tab
Vhara netirairi rakaraswa rinova rekupedzisira rerudzi irworwo rwasara (semuenzaniso, kana vatove narwo
yakaraswa kana kushandiswa nevamwe vatambi musanganiswa yakafumurwa (matatu Bamboo 4 mataira, padhuze neyekupedzisira Bamboo 4 tile). Haikwanise kusanganiswa neKong Robo.
28. Yese Pung
Ruoko rwakaumbwa na4 Pung (kana Kong) uye vaviri vacho.
29. Semipura Ruoko (Ruoko Rwakachena neRukudzo)
Ruoko rune machipisi kubva kune imwe chete yemasutu matatu, pamwe chete ne Honors machipisi.
30. Majee Matatu Akadzedzereka Akasanganiswa
Ruoko rune matatu Chis yemasutu matatu, uye ane machipisi ekutanga ari mukukwira kwedanho rimwe chete.
31. Dzese Mhuri uye Rukudzo
Ruoko rwakaumbwa nemubatanidzwa umo ma tokeni emhando shanu ari mumutambo anoonekwa. Masutu matatu: Hunhu, Dhisiki, Bamboo, pamwe Nemhepo uye maDragoni.
32. Ruoko Rwakaratidzwa
Ruoko urwo musanganiswa wega wega wapedzwa nemachipisi akaraswa nevamwe vatambi, kusanganisira vaviri vacho. Inogona kusanganiswa neKwamirira mapoinzi.
33. Zvidhoma zviviri
Ruoko rune maviri Pung (kana Kong) eDragons.
34. Akavanzwa Kong
Ruoko runosanganisira maviri Kong asina kufumurwa.
35. Manera akasanganiswa
Yakatwasuka (mataira kubva pa1 kusvika pa9) akaumbwa naChis wemasutu matatu. Inogona kusanganiswa naTodo Chi.
Ruoko rwakaumbwa nemubatanidzwa wakaumbwa nematiles akaenzana akatwasuka (ndokuti, neaya mataira anotaridzika kumeso kumeso akatarisana pasi: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 eDisc, 2, 4, 5, 6 , 8, 9 yeBambúes uye White Dragon. Iyo poindi yeHusipo Mhuri inosanganisirwa.
37. Triple Chi Yakasanganiswa
Ruoko rune matatu akaenzana Chis, asi masutu akasiyana.
38. Matatu Akadzedzereka Akasanganiswa Pung
Ruoko rune matatu Pung kana Kong, imwe neimwe yesutu yakasiyana uye nhamba yakakura kupfuura yePung yapfuura.
Ruoko rusina mapoinzi. Pfungwa dzeMaruva hadziverenge kusvika kune ichi zvibodzwa. Maruva acho anowedzerwa mushure memapoinzi masere kuti akunde.
Kuvhara, semuenzaniso, nekurasa kweiyo 3 ye Bamboo (isiri iyo yekupedzisira chidimbu cheiyo 3), uye kusava ruoko rwakavanzwa kana ruoko rwakafumurwa. Saka zvinozadzikiswa kuti haisi All Chi, kana All Pung, hapana poindi dzeMirira, kana Pung yeTerminals kana Honors, kana yeChiratidzo chekupedzisira, nezvimwe.
40. Tab yekupedzisira yeRusvingo
Vhara netara yekupedzisira kumadziro. Haikwanise kusanganiswa neVhara iyo Rusvingo.
41. Rasai Chiratidzo chekupedzisira cheMadziro
Vhara nekurasa kwetira yekupedzisira pamadziro.
42. Pedyo neExtra Kong Token
Vhara nechimwe chiratidzo chakatorwa mushure mekuwana Kong.
43. Kong kupamba
Vhara nechiratidzo chakabiwa kune mutambi waakapfuura naye kubva pachena Pung kuenda Kong. Hazvigone kusanganiswa neRakakwana Chakavanzika Ruoko.
44. Zviratidzo Zvakasonhwa NeKushoma Kupi
Ruoko rwakagadzirwa kubva pamataira anotevera: 5 kana 6 Honours (isina kubatanidzwa) pamwe chete ne subset ye 8 kana 9 yakasona mataira. Nematanho manomwe ekuremekedza, mutambo unonzi Sewn Tokens ine Grand Honors. Ruoko runofanira kuvanzwa, kunyangwe rusingafanirwe kunge rwakavanzwa zvachose, ndiko kuti, tile yakaraswa inogona kudhonzwa kuti ivhare. Hazvigone kusanganiswa neMhuri Dzese kana Ruvande Ruoko.
45. Akasona Zviratidzo
Mutambo wakakosha une machipisi 1-4-7 eimwe sutu, 2-5-8 yeimwe sutu uye 3-6-9 yesutu yechitatu. Ruoko harufanire kuvanzwa (zviripachena, kuraswa kunogona kudhonzwa pasina iko kuvhara kwekubatanidzwa kwechina, kwete kwematairi akasonerwa). Inogona kusanganiswa naTodo Chi.
46. ​​Mukuru 4
Ruoko runongova nezvipisi zvitanhatu kusvika pa6. Iyo No Yekuremekedza Ruoko poindi inosanganisirwa.
47. Yepazasi 4
Ruoko runongova nezvipisi zvitanhatu kusvika pa1. Iyo No Yekuremekedza Ruoko poindi inosanganisirwa.
48. Mhepo Huru Tatu
Ruoko runosanganisira 3 Mhepo Pung kana Kong.
49. Masitepisi Akachena
Ruoko rwunogadzirwa ne1-9 yakatwasuka machipsi eiyo sutu imwechete, ichiumba matatu akateedzana Chis.
50. Extreme Chis yemhuri nhatu
Ruoko runosanganisira Chows 1-2-3 uye 7-8-9 yeimwe sutu, Chows 1-2-3 uye 7-8-9 yeimwe sutu uye maviri e5 echimwe chechitatu sutu. Pfungwa dzeMixed Double Chi, Two Terminal Chis, No Honors uye All Chi dzakatoverengerwa.
51. Vatatu Vakachena Vakatsika Chis
Ruoko runoumbwa neChis nhatu yesutu imwechete, imwe neimwe iine chidimbu chekutanga chinotanga nenhamba kana maviri akakura kudarika chidimbu chekutanga cheChi yapfuura, asi kwete musanganiswa wezvose zviri zviviri (ndiko kuti, kana maChis matatu ane zvidimbu zvekutanga chinguva cheimwe kana chese vatatu Chis vari muchikamu chevaviri).
52. Zvese ne5
Ruoko urwo musanganiswa wese unosanganisira mashanu (kusanganisira vaviri).
53. Yakasanganiswa Triple Pung
Ruoko rune matatu akaenzana Pung (kana Kong), asi imwe neimwe yesutu yakasiyana.
54. Pung Tatu Yakavanzwa
Ruoko runosanganisira matatu asina kutaurwa Pungs (yakavanzwa Kong haina kuverengwa).
55. Mapara manomwe
Ruoko rwakaumbwa nemapara manomwe echips. Izvo zvinogara zvichipera neRinyore Rindira. Tile yakaraswa inogona kudhonzwa kuti ipedze mutambo. Haikwanise kusanganiswa neZvose (Pung ye) Mapara, Akavanzwa Ruoko, kana Rakareruka Bata maoko. Inogona kusanganiswa neMhuri Dzese, Rakavanzwa Ruoko Rwakakomberedzwa, Chiratidzo chakakomberedzwa, Kwete Rukudzo, Zvese Zvakareruka, 1 Mhuri Isipo, MaTerminal ese, kana All Honours.
56. Zviratidzo Zvakasimbiswa neRukudzo Rukuru
Ruoko rwakagadzirwa neese eanomwe maRukudzo (asina kudzokororwa) uye mataira kubva kumasutu matatu anoumba kuteedzana kwemanomwe Akasimbiswa mataera (ndokuti, ane chero mataera manomwe evapfumbamwe anoumba ruoko rwematare akasungirirwa: mataira 1- 4-7 yesutu imwe, 2-5-8 yeimwe sutu uye 3-6-9 yesutu yechitatu). Ruoko runofanira kuvanzwa. Hazvigone kusanganiswa nemaoko: Dzese Mhuri, Yakavanzwa Ruoko, kana Rakareruka Rindira.
57. Vezera Rangu (All Pung of Peers)
Ruoko rwakagadzirwa naPung rwemataira kunyange (kusanganisira iwo maviri). Pfungwa dzePese Pung, Kwete Rukudzo uye Zvese Zvakareruka zvakatoverengerwa. Inogona kusanganiswa neHusipo Mhuri kana Yakachena Ruoko.
58. Ruoko Rwakachena
Ruoko rwune machipisi esutu imwe chete uye pasina maHonero. Pfungwa kubva kuNo Honors ruoko inosanganisirwa.
59. Katatu Chi Zvakafanana
Vatatu vakaenzana Chis uye nesutu imwechete. Hazvigone kusanganiswa nePure Yakateedzana Pung ruoko.
60. Matatu Pung akateedzana akachena
Bata nematatu Pung (kana Kong) eiyo sutu imwechete, imwe neimwe iine nhamba yakakura kudarika imwechete yuniti kupfuura yekupedzisira. Haikwanise kusanganiswa neTatu Chi Chakafanana.
Ruoko runosanganisira musanganiswa wematiles 7, 8 uye 9 (kusanganisira iwo maviri). Pfungwa dzeNo Honours dzakabatanidzwa. Inogona kusanganiswa neAll Pung, Mhuri Isipo kana Ruoko Rwakachena.
Ruoko runosanganisira musanganiswa wematiles 4, 5 uye 6 (kusanganisira iwo maviri). Pfungwa dzeNo Honours dzakabatanidzwa. Inogona kusanganiswa neAll Pung, Mhuri Isipo kana Ruoko Rwakachena.
63. Tabhu Dzakadzika
Ruoko runosanganisira musanganiswa wematiles 1, 2 uye 3 (kusanganisira iwo maviri). Pfungwa dzeNo Honours dzakabatanidzwa. Inogona kusanganiswa neAll Pung, Mhuri Isipo kana Ruoko Rwakachena.
64. Vana Vakachena Vakatsika Chis
Ruoko rwechina Chis ye sutu imwechete, imwe neimwe iine mataira ekutanga akadzedzeresa imwe kana mbiri nhamba zvine chekuita netara yekutanga yeChi yapfuura.
65. Vatatu Kong
Ruoko runosanganisira matatu Kong. Vanogona kuvanzwa kana kuratidzwa.
66. All Honours uye Zviteshi
Ruoko runosanganisira zvachose maTerminal (makaunda 1 ne9) uye Honors (Winds uye Dragons). Hapana mamwe mapoinzi anotenderwa kumatambo ekutanga eMhepo uye maTerminals. Pfungwa dzeZvose Pung, Terminal Pung uye Honors Pung zvinosanganisirwa. Inogona kusanganiswa neSemi Yakachena Ruoko, Mhuri Isipo, Dhiragoni Mbiri, Matatu Madhiragoni, Matatu Makuru, Mhepo Mitatu, Mhepo Mina Midiki kana Mhepo Yakakura.
67. Quadruple Chi Zvakafanana
Ruoko rwakagadzirwa naana Chis akaenzana esutu imwechete. Pfungwa dzePure Staggered Pung, Hoard Token uye Yakachena Double Chi inosanganisirwa.
68. Pung ina dzakateedzana
Ruoko runosanganisira ina Pung kana Kong yesutu imwechete, yakadzedzereka neumwe.
70. Mhepo diki diki
Ruoko runosanganisira matatu Pung (kana Kong) eMhepo uye vaviri veMhepo yasara. Inogona kusanganiswa neMhepo Yakakura uye Yemhepo Mhepo. Matatu Makuru Mhepo mapoinzi akasanganisirwa.
71. Zvidhoma Zviduku
Ruoko runosanganisira maviri Pung (kana Kong) eDragons, uye rimwe reimwe Dhiragoni. Pfungwa paPung yemumwe maDragoni haaverengerwe.
72. Rukudzo rwese
Ruoko rwakagadzirwa chose neRukudzo (Mhepo uye / kana maDragons). Inogona kuumbwa nePung kana Kong, yakavanzwa kana kuratidzwa. Inogona kusanganiswa neDragoni Pung. Todo Pung mapoinzi anosanganisirwa.
73. Pung ina Yakavanzwa (Pfuma Yakavanzika)
Ruoko runosanganisira ina isina kufumurwa Pung (kana Kong). Haikwanise kusanganiswa neRakazara Chakavanzika Ruoko kana Yese Pung.
Ruoko rwakaumbwa nemaviri Lower Chis (1-2-3), maviri Kumusoro Chis (7-8-9) uye maviri e5, ese ari iwo masutu akafanana. Pfungwa dzePure Ruoko, Mapara manomwe, Kupedza Chows uye Yakachena Double Chow inosanganisirwa.
75. Mhepo Yakakura ina
Ruoko rwakaumbwa naPung (kana Kong) rweMhepo ina. Haikwanise kusanganiswa neAse Pung kana Anodzora Mhepo kana Yega Mhepo Pung.
76. Zvidhoma Zvitatu
Ruoko rwakaumbwa naPung (kana Kong) rweiyo maDragoni matatu. Hazvigone kusanganiswa neDragoni Pung.
77. Zvese Green
Ruoko runoumbwa ne2, 3, 4, 6, 8 Bamboo mataira uye, zvingasarudzika, Green Dragons. Inogona kusanganiswa nePure Ruoko, Semi Yakachena Ruoko (kana Green Dragons ikashandiswa), 7 Pairs, Zvakanyatso Hakavanzwa Ruoko, Yese Pung kana Yese Rakareruka
78. Masuwo Mapfumbamwe
Ruoko rwakagadzirwa nemachipisi 1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9-XNUMX yesutu imwechete, ichigadzira vaviri neayo. Ruoko runofanira kuvanzwa. Haikwanise kusanganiswa neHakavanzwa Ruoko, Ruoko Rwakachena, kana Zviteshi uye Honors Pung. Inogona kusanganiswa neRakavanzwa Huru Ruoko.
79. ina Kong
Chero ruoko rune 4 Kong. Vanogona kuvanzwa kana kufumurwa.
80. Mapara Anomwe Akateedzana Akachena
Ruoko rwakaumbwa nemanomwe mapaipi emachipisi esutu imwechete ine nhamba yakadzedzereka neumwe. Haikwanise kusanganiswa nePure Ruoko, Yakavanzwa Ruoko Ruoko, kana Nyore Kubata
81. Nherera gumi nenhatu
Ruoko rwune matiles 1 uye 9 eM Bamboos, 1 uye 9 eDisc, 1 uye 9 yeVatambi, uye yega yeanomwe Honours Iwo maviri anogadzirwa nechero ipi machipisi. Tile yakaraswa inogona kudhonzwa kuti ipedze mutambo. Haikwanise kusanganiswa nePure Ruoko, Yakavanzwa Ruoko Ruoko, kana Nyore Kubata
Kusabatwa zvakanaka uye zvirango
Kana mutambi akatadza kana achizivisa Chi, Pung, Kong kana kutora chiratidzo chekutsiva, anorasikirwa nekodzero yekuhwina mutambo (ruoko rwakafa), kunyangwe iwe uchigona kuramba uchitamba, uchiba marasa, nezvimwe.
Vatambi havagone kukumbira kuraswa uye vochinja pfungwa. Kekutanga iwe pauchaziviswa, kechipiri ichave iri kurangwa game 5 points (kubhadharwa kune mumwe mutambi), wechitatu 10 points, wechina 20 points, zvichingoenda zvakadaro.
Kubata mataira emadziro mutambi wepamberi asati arasa kunoonekwa sekusviba. Kekutanga iwe pauchaziviswa, kechipiri ichave iri kurangwa game 5 points (kubhadharwa kune mumwe mutambi), wechitatu 10 points, wechina 20 points, zvichingoenda zvakadaro.
Kana chiratidzo chisina kuoneka, chinosiiwa kwachiri. Kana iyo chiratidzo ikaonekwa, mutambi haazokwanise kuhwina mutambo iwoyo (ruoko rwakafa), kunyangwe iwe uchigona kuramba uchitamba, uchiba marasa, nezvimwe.
Kumbira Pung nekunonoka
Kumbira chiratidzo chePung ane zvinopfuura 3 seconds kunonoka kunoonekwa sekukanganisa. Kekutanga iwe pauchaziviswa, kechipiri ichave iri kurangwa game 5 points (kubhadharwa kune mumwe mutambi), wechitatu 10 points, wechina 20 points, zvichingoenda zvakadaro.
Nhema Mahjong (Nhema Hu)
Kana mutambi aine asingasviki masere mapfumbamwe unofanira kubhadhara 10 points kune mumwe mutambi uye achava ruoko rwakafa, kunyangwe achigona kuramba achitamba, achiba marasa, nezvimwe.
Kana mutambi hazviite zvinodiwa kugadzira Mahjong mukurasa (iwe une anopfuura gumi nemana mataira kana asingasviki gumi nemana, tadza nematairi anovhara, nezvimwewo), iwe unofanirwa kubhadhara 20 points kune mumwe mutambi uye achava ruoko rwakafa, kunyangwe achigona kuramba achitamba, achiba marasa, nezvimwe.
Zvakare, zvese machipisi akaratidzwa nemuzivisi wenhema Mahjong inofanira kuraswa mune anotevera mutambi anotendeuka.
Zvose tab yaratidzwa nemutambi (inodonha paanoiba kubva kumadziro, anoikanda pakati pezvimedu muruoko rwake, nezvimwewo) inofanira kuraswa pane inotevera mutambi cheki.
Muchiitiko icho mutambi ratidza machips ako ese kana mumwe mutambi achizivisa Mahjong ari kuita tsvina. Kana pakupedzisira mutambi akazivisa Mahjong kukunda, mutambi airatidza machipisi ake achave zano.¿ Mumwe mutambi haakunde here? unofanirwa kukanda machipisi akaratidzwa mumwe nemumwe.
Kana mutambi inoratidza imwe faira, anofanira kubhadhara mutambi akakuvara pakati 5-60 mapoinzi yakasarudzwa nemuridzi (uyo anozofunga zvakare kuti aenderere mberi mutambo kana kwete).
Nhamba isiriyo yeMatokeni
Kana mutambi aine asingasviki gumi nematatu machipisi kana anopfuura gumi nematatu pakati pekuchinjana, anazvo ruoko rwakafa, kunyangwe achigona kuramba achitamba, achiba marasa, nezvimwe.